ETU ESI TINYE FOTO N'IME CELL N'IME EXCEL - EXCEL - 2019
Fanye ihe oyiyi na Microsoft Excel
Toshiba Satellite C660 bụ ngwaọrụ dị mfe maka iji ụlọ, ma a chọrọ ndị ọkwọ ụgbọala. Iji chọta ma tinye ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị, e nwere ọtụtụ ụzọ. A ghaghị ịkọwa nke ọ bụla n'ime ha.
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala Toshiba Satellite C660
Tupu ịmalite iji nwụnye, ị ga-aghọta otu esi achọta ngwanrọ dị mkpa. A na-eme nke a n'ụzọ dị nnọọ mfe.
Usoro 1: Ụlọ ọrụ mmepụta
Ihe mbụ ị ga-atụle bụ nhọrọ kachasị mfe ma dị irè. Ọ na-agụnye ileta ngwa ngwa nke laptọọpụ laptọọpụ ma na-achọgharị software dị mkpa.
Gaa na saịtị gọọmentị.
Na mpaghara elu, họrọ "Ngwaahịa Ndị Ahịa" na na menu nke mepee, pịa "Ọrụ na Nkwado".
Wee họrọ "Nkwado maka ngwa kọmputa"n'ime nke ngalaba ọ dị mkpa imepe ụzọ - "Download Driver".
Akwụkwọ nke mepere emepe nwere ụdị pụrụ iche iji mejupụta, nke ị ghaghị ịkọwa ihe ndị a:
Ngwaahịa, Ngwa ma ọ bụ Ụdị Ọrụ * - Portables;
Ezinụlọ - Satellite;
Usoro- Satellite C;
Nlereanya - Satellite C660;
Nkebi Nkebi - dee obere ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ahụ, ọ bụrụ na amaara ya. Ị nwere ike ịchọta ya na labeelu dị na azụ panel;
Usoro njikwa - họrọ os;
Ụkwọ ụgbọala - ọ bụrụ na achọrọ otu ọkwọ ụgbọala kpọmkwem, setịpụ uru a chọrọ. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike ịhapụ uru ahụ "Ihe niile";
Mba - dee obodo gị (nhọrọ, mana ga-enyere aka wepụ ihe ndị na-enweghị isi);
Asụsụ - họrọ asụsụ achọrọ.
Wee pịa "Chọọ".
Họrọ ihe achọrọ ma pịa Download.
Wepụ ihe ndekọ ahụ ebudatara ma debe faịlụ ahụ na folda ahụ. Dị ka a na-achị, e nwere naanị otu, ma ọ bụrụ na e nwere ndị ọzọ, ịkwesịrị ịgba ọsọ ahụ na usoro * exeinwe aha onye ọkwọ ụgbọala n'onwe ya ma ọ bụ naanị nhazi.
Onye oru ulo oru a bu ihe di mfe, ma oburu na ichoro, i nwere ike inabata nchekwa ndi ozo maka idozi, site na idebe onwe gi uzo ya. Mgbe ahụ i nwere ike pịa "Malite".
Usoro nke 2: Usoro mmemme
Ọzọkwa, enwere nhọrọ iji wụnye software site na onye nrụpụta. Otú ọ dị, n'ihe gbasara Toshiba Satellite C660, usoro a bụ naanị maka laptọọpụ na Windows 8. Ọ bụrụ na usoro gị dị iche, ị ga-aga usoro ọzọ.
Iji budata ma wụnye usoro ihe omume ahụ, gaa na nkwado ọrụ nkwado.
Dejupụta ihe ndị dị mkpa gbasara laptọọpụ na ngalaba "Ụdị Ọkwọ ụgbọala" chọta nhọrọ Toshiba Upgrade Enyemaka. Wee pịa "Chọọ".
Ibudata ma kpochapu ihe nchịkwa ahụ.
N'ime faịlụ ị ga-agba ọsọ Toshiba Upgrade Enyemaka.
Soro ntuziaka nke installer. Mgbe ị na-ahọrọ usoro nwụnye, họrọ "Gbanwee" wee pịa "Na-esote".
Mgbe ahụ ịkwesịrị ịhọrọ nchekwa maka nwụnye ma chere ka usoro ahụ mechaa. Gaa usoro ihe omume ahụ ma lelee ngwaọrụ ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa maka nrụnye.
Nzọụkwụ 3: Software pụrụ iche
Nhọrọ kachasị mfe ma dị irè ga-abụ iji ngwanrọ pụrụ iche. N'adịghị ka ụzọ ndị edepụtara n'elu, onye ọrụ ahụ adịghị mkpa ịchọpụta nke ọ bụla onye ọkwọ ụgbọala ga-ebudata, ebe ọ bụ na usoro ihe omume ahụ ga-eme ihe niile n'onwe ya. Nhọrọ a dabara adabara ndị nwe Toshiba Satellite C660, ebe ọ bụ na usoro mmemme adịghị akwado usoro sistemụ niile. Ngwaọrụ pụrụ iche na nke a enweghị oke pụrụ iche ma dị nnọọ mfe iji, ya mere, a họọrọ ya.
Gụkwuo: Nhọrọ ngwaọrụ maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Otu n'ime ngwọta kachasị mma nwere ike ịbụ DriverPack Solution. N'ime mmemme ndị ọzọ, ọ na-enwe nnukwu ewu ewu ma dị mfe iji. Ọrụ ndị ahụ gụnyere ọ bụghị naanị ike imelite ma wụnye ọkwọ ụgbọala ahụ, kamakwa ịmepụtaghachi ihe mgbake na nsogbu, yana ikike ịhazi mmemme arụnyere (arụnyere ma ọ bụ wepu ha). Mgbe mbido mbụ ahụ, usoro ihe omume ahụ ga - elele ngwaọrụ ahụ na akpaghị aka ma gwa gị ihe iji wụnye. Onye ọrụ ahụ pịa bọtịnụ ahụ "Wụnye na akpaghị aka" ma chere maka njedebe nke usoro ihe omume ahụ.
Ihe Ọmụmụ: Otu esi etinye ndị ọkwọ ụgbọala site na iji DriverPack Solution
Mgbe ụfọdụ ị ga-achọ ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka ihe ọ bụla nke ngwaọrụ ahụ. N'okwu ndị dị otú ahụ, onye ọrụ ahụ n'onwe ya ghọtara ihe achọrọ ka a chọta ya, na nke ọ ga-ekwe omume iji mee ka usoro ọchụchọ ahụ dị mfe, ọ bụrụ na ịgaghị na saịtị weebụ, mana iji ID ọrụ. Usoro a dị iche iche na ịchọrọ ịchọ ihe niile n'onwe gị.
Iji mee nke a, gbalịa Njikwa Task na imeghe "Njirimara" akụrụngwa nke ndị ọkwọ ụgbọala chọrọ. Mgbe ahụ chọgharịa ID ya ma jee na enyemaka pụrụ iche nke ga-achọta ihe niile ị nwere ike ịnweta maka ngwaọrụ.
Ihe Ọmụmụ: Otu esi eji NJ ngwaọrụ iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Usoro 5: Mmemme System
Ọ bụrụ na nhọrọ nke nbudata ngwanrọ nke atọ anaghị adabara, mgbe ahụ ị nwere ike iji ike nke usoro ahụ mgbe niile. Windows nwere ngwanrọ pụrụ iche a na-akpọ "Onye njikwa ngwaọrụ"nke nwere ihe omuma gbasara ihe niile nke usoro.
Na ya, ị nwere ike ịnwa imelite onye ọkwọ ụgbọala. Iji mee nke a, malite usoro ihe omume ahụ, họrọ ngwaọrụ na menu pịa menu "Ọkwọ ụgbọala ọhụụ".
Gụkwuo: Kọmputa maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Usoro niile dị n'elu dị mma iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na tebụl Toshiba Satellite C660. Nke n'ime ha ga-arụ ọrụ kachasị adabere na onye ọrụ na ihe kpatara usoro a.